कसरी बच्ने फेसबुकबाट ? अपनाउनुहोस् यी नियम - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ९ बैशाख २०७५, आईतवार ०२:५५ |
केही दिनदेखि प्रविधिबारे सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषय हो– फेसबुकले डाटा बेच्यो । यही विषयमा फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले अमेरिकी संसद्मा १० घन्टासम्म प्रश्नहरुको सामना गरे । उनले त्यहाँ पनि स्वीकारे– फेसबुकले प्रयोगकर्ताको डाटा साँच्चिकै बेचेको थियो ।
त्यसैले, आफ्नो गोपनीयता कसरी कायम गर्ने र डाटा बेचिनुबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्ने थाहा पाउनु आजको आवश्यकता भएको छ । आखिर कसरी बच्ने त फेसबुकबाट ? अपनाउनुहोस् यी नियमः
हटाउनुहोस् मोबाइल नम्बरः
तपाईंले फेसबुकमा आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु भएको छ भने त्यो दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । त्यसैले तत्काल आफ्नो नम्बर हटाउनुहोस् । नम्बर सबैले देख्नेगरि राख्दा त्यसलाई अपरिचितले प्रयोग गर्ने वा फोन गरेर बारम्बार समस्यामा पार्ने पनि हुनसक्छ ।
आफूले फेसबुक पोस्टहरु गर्दा आफू कहाँ छु भन्ने थाहा दिन आफ्नो लोकेसन पनि नराख्नुहोस् । लोकेसन ट्याग बन्द गर्नुभयो भने अनेक समस्याबाट बच्न सकिन्छ । सोच्नुस् त तपाईं घरबाट बाहिर हुनुहुन्छ र फेसबुकमा लोकेसन राख्नुभयो भने घरमा चोरी हुन नसक्ला र ? किनकि तपाईंको पोस्ट त पब्लिकमा हुन्छ र सबैले देख्न सक्छन् ।
क्षणक्षणमा अपडेट नगर्नुहोस्ः
कसैको बानी हुन्छ, क्षणक्षणमा अपडेट गरिहाल्ने । तर, यस्तो बानीले कहिलेकांही चाहिँ समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले यस्तो बानी पनि हटाएको राम्रो हुन्छ ।
जन्ममिति फेसबुकमा राख्नु भनेको आफ्नोबारे धेरै जानकारी अरुलाई दिनु हो । जन्ममिति कसैलाई थाहा भयो भने तपाईंको क्रेडिट कार्डबारे जानकारी र बैंक अकाउन्ट पनि अरुलाई थाहा हुन सक्छ, त्यसैले यस्तो बानी सक्दो छिटो हटाएको राम्रो हुन्छ ।
नचिनेकालाई अनफ्रेन्ड गर्नुहोस्ः
चिनेका व्यक्तिलाई मात्र साथी बनाउन सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । कुनै सम्बन्ध नै नभएको मानिसलाई साथी बनाउनु त्यति राम्रो हुँदैन । जानेर वा नजानेर नचिनिएका व्यक्तिको रिक्वेस्ट आएको छ भने त्यसलाई जतिसक्दो छिटो हटाउनुहोस् ।
परिवारका फोटो धेरै नराख्नुहोस्ः
हामीमध्ये धेरैको बानी हुन्छ, आफ्नो बालबच्चाको फोटो बारम्बार फेसबुकमा अपडेट गर्ने । तर, यो बानी राम्रो होइन । किनकि आफ्नो परिवारबारे सबैलाई थाहा दिँदा कुनै दुर्घटना पनि हुनसक्छ । त्यसैले समयमा नै सचेत बन्नु राम्रो हुन्छ ।
Previousमेलम्चीवासी भन्छन् : मेलम्चीको पानी नसोचे हुन्छ
Nextबार्सिलोनाले जित्यो कोपा डेल रेको उपाधी